विहान उठ्दा स्वास गनाउने समस्या छ ? यसो गर्नुहोस - pnpkhabar.com
You are at:Home»स्वास्थ्य/जीवनशैली»विहान उठ्दा स्वास गनाउने समस्या छ ? यसो गर्नुहोस
विहान उठ्दा स्वास गनाउने समस्या छ ? यसो गर्नुहोस
By रिता घिसिंग on २५ भाद्र २०७५, सोमबार ११:२८ स्वास्थ्य/जीवनशैली
एजेन्सी : विज्ञानले विहान स्वास गनाउने समस्यालाई ‘ह्यालिटोसिस’ (Halitosis) भन्छ। दाँत सफा नगर्ने बानीले गर्दा, सुत्ने तरिका नमिल्दा अनि केही खानेकुराह खाँदा विहान स्वास गनाउने गर्दछ। राति सुत्दा मुख सुक्खा भयो भने पनि स्वास गनाउने गर्दछ। हुन त दुर्गन्धित स्वास हुनुका कारणहरू थुप्रै छन्, तर त्यी समस्यालाई समाधान गर्ने तरिकाहरू पनि पक्कै थुप्रै छन्।